मन्त्री पद छाडेका शेरबहादुर पत्निले श्रीमानबारे मुख खोलिन् !
प्रकाशित मिति : : मङ्लबार, साउन १५, २०७५
पद आउछ जान्छ ठुलो बिषय होइन ! मन्त्री र साम्सद बन्नु पनि ठूलो कुरो होइन ! हामी कसैलाई ठूलो लाग्दो हो भने त्यो पनि ठुलै भ्रम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भने यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मात्र हो र पद सधै अस्थाई हुने गर्छ तर कामको आधारमा कमाइने प्रतिष्ठा सधैं बाचिरहन्छ !
भ्रष्टचार अन्त गरेर समृद्धि निर्माण गर्ने अभियान मा लागेको यो सरकार र नेतृत्व को निर्देशन बमोजिम कुरा मात्र होइन काममा निस्ठा देखाए क. शेर बहादुर तामाङले ! सोझा र इमानदार मात्र होइन मलाई त वाहा गौतम बुद्ध जस्तै लाग्छ !
क शेर बहादुर तामाङ जब कानुन मन्त्री बन्नु भयो निकोइ दुस्साहसि काम थालनी गर्नु भयो । यश मानेमा दुस्साहसि हो कि भ्रस्टाचार ले अक्रान्त यो मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु त्यो पनि कानुन बनाएर भन्नू निकै जटिल कुरा हो भन्ने म बुझ्ह्दै थिए ।
यो कामको थालनी कम्तीमा क शेर बहादुर तामाङ्ले गर्नु भो ! म एउटा ब्यक्ति जसले वाहालाई नजिक बाट चिन्छदछु वाहाले गरेको काम प्रति नत मस्तक छु! एकचोटि सलाम कमरेड भन्न मन लागेको छ !
धेरै साथी हरु को स्टस्ट्समा क . शेरबहादुर को समर्थन गर्दै उल्लेख छ सत्यको जित कहाँ हुन्छ र सतिले सरापेको देशमा ! ??
वाहाले थालेको भ्रस्टाचार बिरोधि अभियान अब हाम्रो काधमा छ! त्यो सरकारले पुरा गरोस् ! यो बिषयमा , न्यायको पक्षमा उभिएर हामिलाई एक्यवद्धता गर्नु हुने , हामिलाई घरमै आएर सान्त्वना सद्भाभाब प्रकट गर्नु् हुने , फोन मार्फत भन्नू हुने र फेस बुक ट्विटर मार्फत आफ्ना अमुल्य भनाई लेखेर साथ दिनु हुने हाम्रा नेता, नेतृत्व, बुद्धिजीवी, लेखक , पत्रकार तथा सर्बसाधरण जनता प्रती हार्दिक सलाम ! हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु !!!
कार्ल मार्क्सको जन्मस्थलमा पुगेपछी डा. भट्टराईले यस्तो भने !
‘कांग्रेसले गर्दा गोविन्द केसी उठे’ भन्ने गगनलाई रवीन्द्र मिश्रले यसरी सुताए !
दुई तिहाइको अहंकारले ओली सरको नाक झण्डै दुई तिहाइ काटियो : खगेन्द्र संग्रौला
देशकै सबैभन्दा बढी उचाइ भएको स्थानमा केबलकार निर्माण हुँदै
आज साउन १५, खीर खाने दिन, यस्तो छ महत्व !
बुढा मरेको पनि यहीँ हो, म पनि यही मर्न चाहन्छु : गंगामाया